रोचक GNN Nepal रोचक
पार्किङमा राखिएको गाडी एक्कासी डुबेपछि…
एजेन्सी । यतिबेला सामाजिक संजालमा एउटा भिडिओ भाइरल छ । मुम्बाई रेसिडेन्सियल कम्प्लेक्सको पार्किङमा भएको एउटा गाडी खाल्डोमा डुबेको भिडिओ भाइरल भइरहेको भारतीय अखबार अटो हिन्दुस्तानले जनाएको छ । आइतबारदेखि
जेठ ३१ गते, २०७८ १५:५३ मा प्रकाशित
मास्क लगाउने ग्राहकलाई ५ डलर जरिवाना
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको महामारीको यो समयमा संक्रमण फैलिनबाट रोक्न तथा संक्रमित हुनबाट बँच्नको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपाय भनेको मास्क लगाउनु नै हो । धेरै मुलुकहरुले अहिले सार्वजनिक स्थानमा अनिवार्य
जेठ १८ गते, २०७८ १२:१२ मा प्रकाशित
चीनले एक जोडीलाई तीन सन्तान जन्माउन दिने
चीनमा काम गर्न सक्षम जनसंख्या घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा अब प्रत्येक जोडीलाई कम्तीमा तीन सन्तान पाउनका लागि अनुमति दिइने भएको छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको अध्यक्षतामा बसेको पार्टी पोलिटब्यूरो बैठकमा एक
जेठ १७ गते, २०७८ १३:३८ मा प्रकाशित
दुई मौरीले मिलेर खोले फ्यान्टाको बोतलको बिर्को (भिडियोसहित)
एजेन्सी । मौरीहरू अत्यन्तै सक्रिय प्राणी हुन् । काम गर्न उनीहरू कहिल्यै अल्छी मान्दैनन् । हालै दुईवटा मौरीले सडक किनारमा रहेको फ्यान्टाको बोतलको बिर्कोलाई खोल्न कोशिश गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको
जेठ १३ गते, २०७८ १३:२२ मा प्रकाशित
कोरोनाका छल्न आकाशमै विवाह गरेपछि (भिडियो)
भारत यतिबेला कोरोनाको दोस्रो लहरले प्रभावित छ । जसका कारण देशका अधिकाँश स्थानमा लकडाउन लागू गरिएको छ । कोरोनाविरुद्धको प्रतिबन्ध लागू भएकाले भारतमा विवाह समारोह धेरै मानिसको उपस्थितीमा गर्न पाइँदैन
जेठ ११ गते, २०७८ १२:३८ मा प्रकाशित
धर्तीमा कोरोना संक्रमण बढेकाले एक व्यापारीले किने चन्द्रमामा जमिन
एजेन्सी । भारतको सहारनपुरमा बढ्दो कोरोना संक्रमणको बीचमा बिल्डरले चन्द्रमामा एक प्लट (जमिन) खरिद गरेका छन् । व्यापारीले अनलाइन बोलीमा सामेल भएर बोली लगाएका थिए । उनीसँग पाँच लाख रुपैयाँमा
जेठ १० गते, २०७८ १८:१० मा प्रकाशित
‘शिक्षकहरु आफूलाई मनपर्ने विद्यार्थिलाई बढी नम्बर दिन्छन्’
काठमाडौं । छात्र विद्यार्थिहरु अक्सर विद्यालयमा छात्रालाई बढी नम्बर दिनेबारेमा छलफल गरिरन्छन् । परिक्षामा एउटै प्रश्नको एउटै उत्तर भएपनि शिक्षकले महिलालाई अलि बढी अंक दिने गरेको सिकायत छात्राहरुले गर्दछन् ।
जेठ ८ गते, २०७८ १४:४४ मा प्रकाशित
दुलहीको घुम्टो हटाएर स्वाव संकलन गरेपछि गाउँलेले स्वास्यकर्मीलाई ‘दौंडाई-दौंडाई’ कुटे
एजेन्सी । भारतको उत्तर प्रदेशको प्रत्येक गाउँमा कोरोनाको संक्रमणको परिक्षण द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न त्यहाँको सरकार प्रयास गरिरहेको छ। यस अन्तर्गत गाउँको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आधुनिक उपकरणहरूले
जेठ ४ गते, २०७८ १४:३१ मा प्रकाशित
चलिआएका प्रेमकथाको सुरुवात दुई अपरिचित व्यक्तिले टेस्ट ट्युबमा थुकेर सुरु हुँदैन। तर चेइको मिट्सुईका लागि लामो समयदेखि उनले खोजिरहेको उत्तर थुकको नमुनामा नै भेटियो। उनले आफ्नोलाई सही व्यक्ति भेटिन् र
वैशाख २९ गते, २०७८ १७:४७ मा प्रकाशित
मास्कमाथि नै श्रृंगार गरेर विवाहमा गएपछि…
कोरोना भाइरसको महामारीको क्रममा अधिकांश मानिसहरु संक्रमित हुनबाट बच्नका लागि आफ्ना घरमा कैद भएका छन् भने केही मानिसहरु विवाह समारोहमा जानका लागि जस्तोसुकै हद पनि पार गर्न तयार छन् ।
वैशाख २६ गते, २०७८ १५:५५ मा प्रकाशित
१५ वर्षदेखि काममा नगई तलब खाइरहेको अस्पतालका एक कर्मचारीमाथि आरोप
इटलीको एउटा अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारीले पूरा तलब प्राप्त गर्ने गरी लगाइएको काम १५ वर्षदेखि नगरेको आरोप लगाइएको त्यहाँको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। दक्षिणी सहर क्याटानजारोस्थित चाच्चो अस्पतालमा कार्यरत ती
वैशाख ९ गते, २०७८ १५:३६ मा प्रकाशित
विवाहको दिन धेरैका लागि जिन्दगीभरि याद रहिरहने दिन हो। पूर्वी चीनको सुजौकी एक युवतीका लागि भने यही दिनले जिन्दगीमा रहस्यको नयाँ पर्दा उघारिदियो। चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार मार्च ३१ मा सुजौमा
चैत २७ गते, २०७७ १३:०७ मा प्रकाशित
अनलाइन मार्फत आइफोन अर्डर गर्दा कफी टेबल आएपछि…
एजेन्सी। अनलाइन अर्डर गर्दा कतिपय कम्पनीले अर्कै सामान पठायो भन्ने कुरा तपाईले सुन्नु भएकै होला । यस्तै एउटा घटना थाइल्याण्डमा पनि भएको छ । एकजना किशोरले निकै सस्तो पाइयो भनेर
चैत १६ गते, २०७७ १३:४१ मा प्रकाशित
चोरि गर्न जाँदा रेलिङमा टाउको अड्किएपछि…
मेक्सिकोमा एउटा चोरीको अनौठो घटना बाहिरिएको छ । एउटा घरमा चोर्न गएको चोर भित्र जाँदै गर्दा उसको शिर रेलिङमा फसेको थियो । तीन घन्टासम्म चोर रेलिङमै अड्किएको थियो । रेलिङबाट
चैत ८ गते, २०७७ १५:११ मा प्रकाशित
अमेरिकामा ७७ फिट लामो हिउँसर्प : रोचक कथा, हेर्दै राम्रो!
अधिकांश मानिसहरूको निम्ति हिममानव बनाउनु कडा श्रमको काम हो। तर अमेरिकास्थित कोलोराडोको एउटा परिवारले बनाएको हिमसर्पको प्रतिमा निर्माणको कथा रोचक छ। मोर्न मोस्लेय र उनका पाँच जना भाइबहिनीहरूले यो वर्ष
फागुन २६ गते, २०७७ ११:५९ मा प्रकाशित
सयौँ मानिसको अस्थिपञ्जर छरपस्ट, भारतको एउटा हिमाली तालको रहस्य
भारतीय हिमालयस्थित एउटा हिमाली उपत्यकामा रहेको विकट तालमा सयौँ मानव अस्थितपञ्जर छरिएका छन्। उत्तराखण्ड राज्यस्थित भारतको एउटा अग्लो हिमाल त्रिशूलको चुचुरोको ठाडो भिरालोमा रहेको रूपकुण्ड समुद्र सतहबाट ५०२९ मिटर उचाइमा
फागुन २३ गते, २०७७ १३:२० मा प्रकाशित
सेनामा जागिर नपाएपछि एक युवकले पुलिसलाई कल गरेर भने – ‘ताजमहलमा बम भेटियो’
एजेन्सी । विश्वका सात आश्चर्य मध्ये एक भारतमा रहेको ताजमहलमा बम भेटिएको खबर प्राप्त भयो । बमको सूचना पाएपछि भित्र आएका पर्यटकहरूलाई बाहिर निकालियो र ताजमहलका दुवै ढोका बन्द गरियो
फागुन २० गते, २०७७ १३:३७ मा प्रकाशित
१२ औं तलाबाट खसेकि बालीकालाई ड्राइभरले समातेपछि….
एजेन्सी । भियतनाममा २ वर्षीया बालीका एक भवनको १२ औं तलाबाट खसेको छिन् । तर उनलाई तल डेलिभरी ड्राइभरले समातेपछि ज्यान बचेको छ । बच्चालाई सामान्य चोट लागेको छ र
फागुन २० गते, २०७७ १२:३५ मा प्रकाशित
एन्जेलिना जोलीले झण्डै दश मिलियनमा बेचिन् विन्स्टन चर्चिलले बनाएको दुर्लभ चित्र
एजेन्सी । हलिउड अभिनेत्री एन्जेलिना जोलीले लन्डनको क्रिस्टीमा रहेको टावर अफ द कुउतूबिया मस्जिदमा एउटा दुर्लभ विन्स्टन चर्चिलले बनाएको चित्र ९.७५ मिलियनमा बेचेकी छिन्। लिलामी अघि, उक्त पेन्टिङको मूल्य १५
फागुन १९ गते, २०७७ १६:३० मा प्रकाशित
एजेन्सी । संसारभरि थुप्रै प्रकारका अपराधहरू हुन्छन्, जसको बारेमा हामी सबैलाई थाहा हुन्छ। त्यस्ता अचम्मित घटनाहरूको बारेमा थाहा पाउँदा छक्क पर्छौं। भने कुनै घटनाको बारेमा सुन्दा रिस पनि उठ्छ ।
फागुन १३ गते, २०७७ १२:२७ मा प्रकाशित